कस्तो रोमाञ्चक खेल ! अफगानिस्तानसँग भारत बराबरीमा रोकियो - Everest Dainik - News from Nepal
कस्तो रोमाञ्चक खेल ! अफगानिस्तानसँग भारत बराबरीमा रोकियो
काठमाडौं, असोज १० । यूइएइमा जारी एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत सुपर फोरको खेलमा भारत र अफगानिस्तानबिचको खेलमा बराबरी भएको छ । पहिले ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तानले निर्धारित ओभरमा ८ विकेटको क्षतिमा २५२ रन बनायो ।
जवाफी ब्याटिङ गरेको भारतले ४९ ओभर पाँच बलमा २५२ रन बनायो । अफगानिस्तानको टिमले भारतलाई जित निकाल्न दिएन । अफगानिस्तानको बलिङ र ब्याटिङ दुवै उत्कृष्ट देखियो । भारतका लोकेश राहुलले ६० तथा अम्बाती रायडुले ५७ रन बनाए ।
यस्तै दिनेश कार्तिकले ४४ तथा रवीन्द्र जडेजाले २५ रन बनाए । भारतलाई अन्तिम ओभरमा सात रन चाहिएको थियो । स्पिनर राशिद खानले बलिङ गरिरहेका थिए । भारतका खलिल अहमद र रवीन्द्र जडे्जा क्रिजमा थिए ।
ओभरको दोस्रो बलमा जडेडाले चौका प्रहार गरे । अर्को बलमा जडेडाले नै एक रन लिए । त्यसपछि स्ट्राइक खलिललाई गयो । राशिदको चौथो बलमा खलिलले एक रन बनाए ।
पाँचौ बलमा जडेजा क्याच आउट भए । योसँगै खेलमा बराबरी भयो । अफगानिस्तानका आफताब आलम, मोहम्मद नबी र राशिद खानले दुई दुई विकेट लिए । यस्तै जावेद अहमदीले एक विकेट लिए।
यसअघि ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तानले ओपनर मोहम्मद शहजादको शतकको सहयोगमा ८ विकेटको क्षतिमा २५२ रन बनायो । शहजादले ११६ बलमा १२४ रन बनाए ।
ट्याग्स: Afaganitan vs india, Asia Cup, India